Hubso: Marna ha seegin shir | Martech Zone
Qeexid: Marna ha seegin Shir
Isniintii, September 16, 2013 Jimco, Juun 8, 2018 Douglas Karr
Waxay umuuqataa dhowrkii isbuucba mar baan taahaa madaama aan seego shir kale oo inbadan oo asxaabteyda ah ay kahadlayaan ama kaqeyb galayaan. Ma ahan sidaan oo kale iskuma dayi inaan sii wado…
Kordhi rajeynayaa in taas lagu beddelo qoraalka Marnaba Ha Iloobin Shir Kale.
Waxay daabaceen a manifesto boggooda, 10 meelood oo aan ku hagaajin karno shirka:
Ka raadinta khadka tooska ah shirarka waa cilladaysan tahay. Kaliya intaas haddii aad isku daydo inaad ku shaandheyso natiijooyinka iyadoo loo eegayo goobta, xiisaha, luqadda iyo waqtiga. Waa qeyb nolosha ka mid ah halka raadinta ay ku fashilantay.
Waqtigan xaadirka ah waxaad u maleyneysaa inaad tahay ka maqnaa shir weyne meel iyo xitaa ma ogid. Waxaan u baahanahay nidaamyo ka fiican sidii si firfircoon noogu sii hayn lahaayeen wareegga. Halkii laga raadin lahaa shirarka shirarka ku habboon waa inay na helaan.
Inta badan shabakadaha shirka waxay naga dhigeysaa inaan dareemo inay tahay sanadkii 1999, hadana waligeed ma sahlaneyn sameynta khibradaha isticmaale ee qadka. Sideen ugu xirnaa farqiga muuqda ee u dhexeeya qabanqaabiyeyaasha iyo teknolojiyadda?
Iyada oo waqti yar iyo lacag la heli karo celceliska shaqaalaha waxay ka dhigan tahay in badanaa nalaku qasbay inaan u gudubno shirarka aan dhab ahaan dooneyno inaan ka qeybgalno. Laakiin sidee si hufan uga qayb qaadan karnaa shir iyadoo aan la joogin? Horusocodka isku xirnaanta fog tani waa inay suurta gal noqotaa maanta.
Way adag tahay in la helo helitaanka aqoonta soo saaray laguna soo bandhigay shir. Waxaad ka heli doontaa xoogaa yar yar oo jajab ah oo ku kala firirsan webka, shabakadaha bulshada, sanduuqyada iyo darawallada adag. Laakiin xaggee ka heshaa sawirka buuxa oo aad ka heshaa waxa aad dhab ahaan raadineyso?
Dhaqankeenna aqooneed suurtagalnimada qof keliya oo wax ka ogaanaya in ka badan 200 oo qof ayaa maalinba maalinta ka dambaysa ku sii yaraanaya. Sidee ayaynu ugu isticmaali karnaa tikniyoolajiyadda guran xigmadda wadareed dhamaan maskaxda cajiibka ah ee kaqeybgalaysa shirkaaga xiga?
Maanta inta badan ma ogid yaa tagaya shir ilaa aad dhab ahaan halkaas joogto. Shirka ka dib waxaad badiyaa ku guul darreysataa inaad xiriir la yeelatid qof aad la kulantay. Xaqiiqdii waa inay jirtaa dariiq ka wanaagsan.
Dad badan ayay ku adkaan kartaa in lala socodsiiyo shisheeyaha oo la bilaabo hadalka. Maxaynaan nidaam ugu heli karin meesha aan awoodno wadahadal bilow shir kahor, ka dib sii wad shirka iyo xitaa markuu dhammeeyo ka dib?
Xitaa markaan jir ahaan u soo bandhigno qayb ka mid ah feejignaanteenna waxaa si joogto ah ugu heelan nolosheena internetka. Sideen tan ugu beddeleynaa wax wanaagsan goobta shirka? Oo sidee baynu yeelnaa macne ku dhex abuur dhawaaqa dhijitaalka ah taasi badanaa waxay umuuqataa inay mugdi galinayso shuruudaha barashada qotoda dheer?
Goorma ayuu shirku guuleystaa? Sideen u cabirnaa kan saameynta dhabta ah ee shir, labadaba abaabulayaasha, hadlayaasha, goobaha iyo kaqeybgalayaasha? Doolar kasta oo lagu kharash gareeyo shir weynaha waa inaan ogaanaa soo noqoshada saafiga.
Saxiix iyo i soo raac on Conferize si aan u ogaado shirarka aad ka qeyb galeyso, waad ogtahay meesha aan ka hadlayo, waana iska kaashan karnaa midba midka kale!
Tags: network networkxaqiijinhel shirshirka suuq geyntanetwork bulshada
ZoomInfo: Hayso Xogtaada B2B
Baaxadda: Falanqaynta Mobilada ee Go'aan qaadayaasha
Sep 19, 2013 at 7: 16 AM
Hi Douglas - boostada weyn iyo mahadsanid inaad xiisayso! Xiriiro